Vavaka ho an'i Saint Charbel. ? Ho an'ny tranga sarotra, ny fitiavana ary ny marary
Vavaka ho an'i Saint Charbel. Voalaza fa afaka namerina nanantena ny renim-pianakaviana tanora iray narary mafy i St. Charbel. Ny tantara dia milaza amintsika fa very ity finoana ity vehivavy ity ary nisy fotoana iray nanoro hevitra azy ny pretra hanao azy vavaka ho an'ny olo-masina charbel manampy anao amin'ny olan'ny fahasalamanao.
Na izany aza, resy lahatra ilay vehivavy fa tsy nisy nihaino ny fivavahany, nandritra ny andrana farany, saika tsy misy hery, dia nanangana an'io vavaka io izy ary nandray ilay fahagagana izay efa niandrasany be.
Matanjaka, matanjaka ary tokana ho antsika amin'ireo fotoana ireo raha toa nanjavona ny fanantenana, ny vavaka dia izao foana.
1 Vavaka ho an'i Saint Charbel
1.1 Vavaka ho an'i Saint Charbel amin'ny raharaha sarotra
1.2 Vavaka mahagaga ho an'i Saint Charbel ho an'ny fitiavana
1.3 Vavak'i Saint Charbel ho an'ny marary
1.4 Vavaka fanao mahagaga amin'ny asa
Alohan'ny hanaovana ny vavaka ho an'i Saint Charbel dia tsy maintsy mahita hoe iza io olo-masina io.
Lazao ny tantara fa ny anarany dia Youssef Antoun Makhlouf ary teraka tao amin'ny tanàna iray any Libanona tamin'ny 1828.
Nanokana ny tenany ho amin'ny fivavahana izy, nanolotra ny tenany ho vatana sy fanahy ary fantatra ho Maronita ary rehefa niditra tao amin'ny iray amin'ireo monastera ireo dia nahazo ny anarana hoe Charbel ary tamin'ny 1859 dia notokanana ho pretra izy.
Avy any Nanohy ny fiainany tanteraka izy tamin'ny finoany, dia Dios, ny fiangonana y l vavaka. Mpitoriteny ny teny izay koa traumatologist.
Enina ambin'ny folo taona izy no nipetraka tao amin'ny fivoriambe San Marón ary nanadino momba ny fianakaviana, trano, namana ary ny taniny.
Tamin'ny fotoana nahafatesany, dia misy olona milaza fa avy amin'ny fasany, izay hita tao amin'ny fasan'ny monasitera mitovy, dia nisy jiro mahagaga, nipoitra, tranga izay nijanona andro maromaro.
Ny fiainana dia nahazo ny fanasitranana nomen'Andriamanitra ary taorian'ny nahafatesany dia nanohy nanasitrana olona izy.
Nanomboka nitsidika ny fasany ny mpino rehefa afaka nesorina satria ny jiro, tsikaritr'izy ireo fa mamontsina ny hodiny ary misy ra mikoriana avy amin'ny vatany.
Nanomboka teo dia efa maro ny olona nahazo fanasitranana tamin'ny aretina lehibe.
Vavaka ho an'i Saint Charbel amin'ny raharaha sarotra
Ry olo-masina be voninahitra! Saint Saint Belbelbel,
nantsoin'Andriamanitra hiaina irery;
natokana ho fitiavana irery ihany,
ary amin'ny fivalozana sy fahamaotinana,
ary aingam-panahy avy amin'ny fahazavan'ny Eokaristia,
mitondra ny hazo fijaliana amin'ny faharetana sy ny fandaozana ianao,
hanazava ny lalantsika amin'ny finoanao lehibe,
ary ny fofonainanao dia hamafiso ny fanantenanay.
Saint Barbara zanak'Andriamanitra malalany,
fa amin'ny faritry ny tany misy azy, ankoatry ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany
ary amin'ny fahantrana sy ny fanetren-tena marina,
niaina ny fijalian'ny vatana sy ny fanahy ianao
hiditra any an-danitra amim-boninahitra,
ampianaro anay hitarika ny zava-tsarotra eo amin'ny fiainana
amim-paharetana sy herim-po,
ary vonjeo amin'ny fahoriana rehetra izahay
Tsy mahatanty mihitsy izahay
Saint Barbara, olo-mahagaga
sy mpanelanelana mahery amin'ny rehetra mila,
Tonga taminao aho amin'ny fahatokisan'ny foko rehetra
mangataka ny fanampianao sy ny fiarovanao amin'ny toe-javatra sarotra,
Miangavy anao aho, hanome anao fahasoavana
izay tena ilaiko anio,
(ataovy ny fangatahana)
Teny iray taminao avy amin'ny fitiavanao, Jesosy voahombo tamin'ny hazo fijaliana,
Mpanavotra sy Mpanavotra antsika,
Ampy ho azy ny mamindra fo amiko
ary valio haingana ny fangatahako.
ianao izay tia ny Eokaristia Masina,
fa nihinana ny Tenin 'Andriamanitra ianao
ao amin'ny Evanjely Masina,
nahafoy an'izany rehetra izany ianao
izay hampisaraka anao amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy nitsangana
sy ny Reniny malalany, dia i Maria Virjiny,
aza avelanao tsy hamaha vahaolana haingana,
ary ampio izahay hahafantatra an'i Jesosy sy Maria bebe kokoa,
ka mitombo ny finoantsika,
manompo anao tsara kokoa ary maheno ny feon'Andriamanitra,
sy hanatanteraka ny sitrapony ary hiaina amin'ny fitiavany.
Avy amin'ny tranga fantatra voalohany momba ny reny tanora izay nandray ny fahagagana fanasitranana rehefa noheveriny fa tsy misy fanantenana dia lasa io Saint io amin'ny fahagagana ho an'ny raharaha sarotra, izay noheverina fa tsy manana vahaolana.
Fahagagana na aorian'ny nahafatesany, satria avy amin'ny vatany dia misy singa manitra izay misy herin'ny fahagagana.
Ny fiangonana katolika dia miaro ity rano ity ary fantatra amin'ny anarana hoe mena-manohitra an'i Sn Charbel, ilay olon'ny raharaha sarotra.
Vavaka mahagaga ho an'i Saint Charbel ho an'ny fitiavana
Ray Charbel malala, izay mamirapiratra toy ny kintana mamirapiratra eny amin'ny lanitry ny Fiangonana, manazava ny lalako ary manamafy ny fanantenako.
Mangataka aminao aho ny fahasoavan'ny (…) Mangataha ho ahy eo anatrehan'ny Tompo nohomboana tamin'ny hazo fijaliana, izay notompoinao hatrizay. Oh! Saint Charbel, ohatra ny faharetana sy ny fahanginana, dia nifona ho ahy.
Oh! Andriamanitra Andriamanitra ô, Ianao izay nanamasina an'i Saint Charbel ary nanampy azy hitondra ny hazofijaliany, omeo ahy ny herim-po hiaretana ny zava-tsarotra amin'ny fiainana, amin'ny faharetana sy ny fandaozana ny sitrakao masina, amin'ny alàlan'ny fanelanelanan'i Masindahy Charbel, ho anao anie ny fahasoavana mandrakizay ...
Oh! Ry Ray San Charbel be fitiavana, mitodika aminao aho amin'ny fahatokisan'ny foko rehetra.
Ka noho ny fanelanelanana mahery ataonao eo anatrehan'Andriamanitra dia omenao ahy ny fahasoavana angatahiko aminao ...
(apetraho ny fitiavanao)
Asehoy ahy indray ny fitiavanao.
Oh! Saint Charbel, zaridainan'ny hatsaram-panahy, mifona ho ahy.
Oh! Andriamanitra ô, izay nanome ny fahasoavan'i Md Charbel anao hitovitovy aminao, omeo fanampiana aho, hivoatra amin'ny hatsaram-panahy kristiana.
Mamindrà fo amiko, mba hidera anao mandrakizay aho.
Tianao ny vavaka Fahagagana amin'i Saint Charbel ny fitiavana?
Nolaviny ny fitiavan'ny mpivady, ny fianakaviany ary ny namany mba hanomezana azy fitiavana madio madio sy mazoto kokoa ho an'Andriamanitra.
Izany no antony anamboarana an'i St. Charbel fangatahana fitiavana, satria tsy misy olona mahalala ny fitiavan'Andriamanitra, izany no fitiavana madio indrindra misy.
manampy mahavaha olana sarotra ao amin'ny fianakaviana ary ho afaka mahita ny tena fitiavana, na inona na inona firy na fanananao na efa very daholo, dia manam-pahaizana amin'ny tranga tsy azo tanterahina izy.
Vavak'i Saint Charbel ho an'ny marary
Oh! Masina hita taratra.
Ianao, izay nandany ny fiainanao tao irery, tao amin'ny faritry ny herim-panetren-tena.
Izay tsy noeritreretinao el tontolo na koa amin'ny fifalian'izy ireo.
Mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra Ray ianao izao.
Mangataka aminao izahay mba hifona ho anay, hampitehiny ny tanana voatahy ary hanampy antsika. Manazava ny saintsika. Ampitomboy ny finoanay.
Hamafiso ny sitraponay hanohizantsika ny vavakay sy ny fifonana eo anoloanao sy ny olona masina rehetra.
Oh Saint Charbel! Amin'ny alàlan'ny fanelanelanana mahery vaika, Andriamanitra Ray dia manao fahagagana ary manao fahagagana mahatalanjona.
Manasitrana ny marary izy ary mamerina ny antony manelingelina. Izany dia mamerina ny fahitana amin'ny jamba sy ny hetsika ho an'ny malemy.
Ilay Andriamanitra Tsitoha, mijery anay amin'ny famindram-po, omeo anay ny fahasoavana izay angatahinay aminao, noho ny fanelanelanana mahery nataon'i Saint Charbel, (Ekeo ny fangatahana) ary ampio izahay hanao ny tsara sy hanalavitra ny ratsy.
Mangataka ny fifonana ataonao amin'ny fotoana rehetra, indrindra amin'ny ora hahafatesanay, Amena.
Mivavaka ho antsika izahay Ray, Hail Mary ary Gloria Saint Charbel.
Araraoty ny herin'ny vavaka mahagaga ho an'i St. Charbel ho an'ny marary ary hangataka fanampiana.
I Saint Charbel dia nekena ary avy eo namboarina noho ny tranga an'arivony maro eran'izao tontolo izao.
Nasehony tamin'ny fahagagana voalohany fantatra fa ny fanomezana izay natolotra teo aminy dia tsy namela ny vatany na dia aorian'ny fahafatesana aza.
Ny vavak'i Md. Charbel ho an'ny marary dia mahagaga, mitazona ny fijoroana ho vavolombelon'ny mpino am-polony maro ny fiangonana katolika izay milaza fa nahazo fahagagana avy amin'i Saint Charbel ary isan'andro dia misy tantara maro hafa momba ny olona namerina sy nanamafy ny finoany iray amin'ireny fisehoan-javatra mahagaga ireny.
Vavaka fanao mahagaga amin'ny asa
'Ry Jesosy Tompoko, mpanelanelana amin'ny olana sarotra rehetra, mahita asa aho mba hahatanterahako ny maha-olombelona ahy ary ny fianakaviako dia tsy ampy tsy ampy amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana.
Tandremo na dia eo aza ny toe-javatra misy sy ny olona ratsy fanahy.
Amin'ny alalany no ahafahako manatsara ny fiainako sy mankafy ny fahasalamana sy ny heriko.
Ary isan'andro dia manandrana mahasoa ny manodidina ahy aho ary mampanantena ny hanaparitaka ny fanoloran-tenanao ho fanehoana fankasitrahana noho ny fankasitrahanao. '
Ity vavaka Saint Saintbel ho an'ny asa ity dia mahery!
Amin'ny raharahan'ny mpiasa, azonao atao ihany koa ny manatona an'ity olo-masina ity izay afaka manampy anay amin'ny famahana ny toe-javatra sarotra.
Ny toe-javatra sarotra eo amin'ny fiainana miasa dia mety hitranga amin'ny raharaha mety hahitana ny vahaolana tsara indrindra hialana sy hihemotra tsy misy asa.
San Charbel dia afaka manampy antsika hialana amin'ny tsy fifankahazoana misy, izay tena mahazatra amin'ny tontolon'ny asa na inona na inona fahasarotana.
Mahery ny vavaka ary amin'ireto toe-draharaha ireto dia aleo ny ataon'izy ireo alohan'ny hanombohan'ny andro omena, amin'ny fomba dia mihetsika ny vava ratsy ary azo fehezina ny toetra, ka raha misy toe-javatra mitranga dia azo tantanana amin'ny fomba tsara indrindra. .
Vavaka ho an'ny Saint Martin Knight